जति कोसिस गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ? महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं – Jagaran Nepal
जति कोसिस गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ? महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं
कतिपय परिवारले बच्चा नजन्मेकै कारण महिलालाई डिभोर्स दिने वा दोस्रो विवाह गरिदिएको घटनाहरु हामिले देख्दै आइरहेका छौं । बच्चा नजन्मनुमा प्रायः महिला नै दोष मानिन्छ तर यो नितान्त गलत कुरा हो । मेडिकल विज्ञानले पनि यो कुरा सावित गरिसकेको छ कि महिला गर्भवति नहुनुमा उसको पार्टनरको पनि उत्तिकै हात हुने गर्दछ।
यस्ता छन् महिलामा देखिने बाझोपनाका कारण
पाठेघर भित्र मासुको डल्लो ‘ट्युमर’ पलाएमा सामान्य रुपमा गर्भधारण गर्न मिल्ने अवस्थासम्म त्यहि बाटो अपनाउनुपर्छ । तर पाठेघर भित्र मासुको डल्लोले भुण्र बस्ने ठाउँलाई दबाएको छ वा ट्युमर एकदम ठुलो छ भने दुरबिनको माध्यमबाट त्यो ट्युमरलाई निकालेपछि ६ महिनादेखि ८ महिना पछाडि नर्मल गर्भधारण गर्न सकिने डा। रंगिनाले बताइन् । उनि भन्छिन् ‘यस क्षेत्रमा काम गर्दा पाठेघर भित्र भएको ट्युमर फालेपछि महिलाहरु आमा बनेका उदाहरणहरु धेरै छन् ।
उनका अनुसार थाहा नभएका कारणहरुमा विभिन्न पुस्तक र अनुसन्धानका अनुसार परिक्षण गरिसक्दा पनि गर्भ नरहेमा केहि समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर यस्तो केशमा सुरुवातामा ओभुलुसन इन्डक्सन, औषधि र सुइबाट नै कोसिस गर्ने हो । यो प्रक्रृयामा ३ देखि ४ पटक गरेर पनि केहि भएन भने आई।ओ।आई गर्नुपर्छ । आई।ओ।आई पनि ३ देखि ६ पटक भन्दा बढि गर्नुहुदैँन । यदि यो प्रक्रृयाबाट पनि गर्भधारण भएन भने आइ।भि। एफमा जानुपर्ने हुन्छ । महिला स्वास्थ्य डटकम बाट।